Mihamafy hatrany ny fepetra: taxi-moto sy taxi-bisikileta 26 tratra tao Behenjy | NewsMada
Mihamafy hatrany ny fepetra: taxi-moto sy taxi-bisikileta 26 tratra tao Behenjy
Efa naparitaka ny peta-drindrina sy ny fanentanana fa tsy azo atao ny mitatitra olona ao Behenjy mihazo an’i Tsinjony nefa minia tsy manaraka ny lalàna napetraka ihany ireo olona sasany. Vokany, tratran’ny zandary teo am-panaovana ny asany raha nikasa hitondra olona an-tsokosoko tany an-toerana ny taxi-moto sy taxi-bisikileta miisa 26, omaly. Nogiazana avy hatrany ireto taxi ireto ary naiditra “fourrière” ary tsy maintsy nampandoavina lamandy mifanaraka amin’ny 10 tsy maintsy hijanonany.
Toy izany koa ny tao Antsirabe, nanao fidinana tampoka ny mpitandro filaminana ary nisava ireo fiara mpitatitra olona. Taxi-be telo tratra tsy nampiasa “gel désinfectant” na ranom-panafody fanasana tanana nandritra ny fandalovan’ireo mpitandro filaminana nanao ny fisavana.
Hiroso amin’ny fanakatonana bar…
Nohamafisin’ny zandary hatrany fa manomboka izao (omaly io) dia hampahafantarina ny mpivarotra zava-pisotro : bar, karaoke, ny toeram-pilanonana rehetra fa mikatona izy ireo manomboka, omaly taorian’ny fanambarana nataon’ny praiminisitra lehiben’ny governemanta. Hiroso amin’ny fanakatonana sy fisintonana ny taratasy ary fisamborana ireo tratra misotro ny mpitandro filaminana ho an’ireo tsy resy lahatra amin’izany, manomboka anio alarobia 1jolay2020. “Aza manaiky raha tsy misy fanasana tanana ny taxi-be ary aza manaiky asiana olona ny seza afovoany “strapotin”.